လက်စတာနဲ့ပွဲအပြီးတွင်မန်ယူတွင်လစာအလကားယူနေသူများစာရင်းCoral ဖော်ပြ – FBV SPORT NEWS
လက်စတာနဲ့ပွဲအပြီးတွင် ယူနိက်တက်တွင် လစာအလကားထိုင်ယူနေသူများစာရင်း Coral မှဖော်ပြ
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် (14) အဖြစ် လက်စတာအသင်းရဲ့ အိမ်ကွင်းမှာသွားရောက် ကစားခဲ့ရာမှာ2–2ဖြင့် သရေရလဒ်ဖြင့် ပွဲဟာပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်….
ယင်းပွဲတွင် မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ကစားသမားများထဲမှာ လစာဈေးကြီးစွာပေးနေရပြီး ယခုနှစ်တွင် အမှားများသော ကစားသမားစာရင်းကို Coral မှဖော်ပြခဲ့ပါတယ်…..
Coral မှဖော်ပြခဲ့သော စာရင်း တွင် လက်ရှိ ဝေဖန်ခံနေရပြီး ပွဲတိုင်းတွင် အမှားများနေသော မန်ယူကစားသမား (၃) ဦး ပါဝင်ဖော်ပြခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်…
ဒီဂီယာ – ဒီဂီယာ ဖာဂူဆန် လက်ထက်ကနေ ယအခု လက်ရှိ နည်းပြ ဆိုးရှားလ်လက်ထက်ထိ ဂိုးသမားအဖြစ် သက်တမ်းရှည်ဆုံး ကစားသမားတဦးပါ…..သူဟာ လက်ရှိမှာ တပတ်ကို ပေါင် ၃၇၅၀၀၀ ရရှိကာ လက်ရှိ Player Rating အညံ့ဆုံးကစားသမားတဦးဖြစ်ပြီး Coral ရဲ့ဖော်ပြချက်မှာ လစာယူပြီး လက်စွမ်းမပြနိုင်သော ထိပ်ဆုံးကစားသမားအဖြစ် ထုတ်ပြန်ခံခဲ့ရပါတယ်…
မာရှယ် – မာရှယ်ကတော့ ယခုလက်ရှိ တရာသီလုံး ရှေ့တန်းတိုက်စစ်တွင် ဂိုးကန်သွင်းခွင့် ဖြုန်းတီးမှုအများဆုံး ကစားသမားအဖြစ် Coral မှမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းခံရသလို လက်ရှိ လစာအလကားထိုင်ယူနေသော စာရင်းတွင် ဒုတိယနေရာမှ ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ကစားသမားဖြစ်ပါတယ်..မာရှယ်ရဲ့ လစာကတော့ တပတ်ကို ပေါင် ၂၅၀၀၀၀ ရရှိနေသူပါ….
ဟယ်ရီမက်ကွိင်းယား – မက်ကွိင်းယားကတော့ နည်းပြကြီး ဆိုးရှားလ် ရဲ့ လူယုံ ဆိုလည်းမမှားဘူးလို့လည်းပြောရပါမယ်….မက်ကွိင်းယားကတော့ ကျန်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာ အသင်းရဲ့ ခေါင်းဆောင်ရာထူးနဲ့ မထိုက်တန်တဲ့ကစားသမားအဖြစ်ဖော်ပြခြင်းခံခဲ့ရသလို မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ရဲ့အဆိုးဆုံး ဗဟိုခံစစ်မှူး စာရင်းထဲမှာ ထိပ်ဆုံးကနေရပ်တည်ခဲ့သူပါ….သူရဲ့ လက်ရှိ တပတ်လစာပေါင် ၁၈၉၉၀၄ ရရှိနေပြီး Coral ရဲ့ လစာအလကားယူသူများစာရင်းမှာ တတိယနေရာကနေ ရပ်တည်နေပါတယ်…
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ဟာ လက်ရှိကစားသမားများကို အပတ်စဉ်ဈေးကြီး ပေးနေရပြီး ကစားသမားကောင်းတွေ ထပ်မဝယ်နိုင်လောက်တော့ဘူးဟုလည်း အင်္ဂလိပ်မီဒီယာတွေကလည်း ဝေဖန်ခဲ့ကြသလို……အသင်းရဲ့ပရိတ်သတ်တွေကလည်း ဒေါသထွက်နေကြပါတယ်..
ယူနိက်တက်ဟာ ဇန်နဝါရီအပြောင်းအရွေ့မှာလက်ရှိကစားသမားတွေလစာကိုလျော့ချပြီး အသင်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ကစားသမားဝယ်ယူမှုတွေပြုလုပ်မယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်နေပါတယ်..မန်ချက်စတာယူနိက်တက်နည်းပြဟောင်းကြီး ဖာဂူဆန်ကလည်း ယင်းကစားသမားများအပေါ် စိတ်အပျက်ကြီးပျက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို အမှုဆောင်ချုပ် အက်ဝုဒ်မှ ပြောခဲ့ပါတယ်…..
မာရှယ်ဟာ သဘာဝကပေးတဲ့ နံပါတ် ၉ မဟုတ်ဘူးလို့ ဂန္ဓဝင်ကြီးတွေဝေဖန်